स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई चाहिने औषधिको अभाव – इन्सेक
स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई चाहिने औषधिको अभाव
महोत्तरी ०७५ असोज १४ गते
गौशला नगरपालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई चाहिने औषधिको अभाव भएको छ ।
आर्थिक वर्ष शुरू भएपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले औषधि पठाउन छाडेकाले औषधि अभाव भएको हो । स्थानीय तह आफैँले औषधि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै कार्यालयले औषधि पठाएको छैन ।
कार्यालयले औषधि पठाउन छाडेपछि दुई महिनायता दैनिक अत्यावश्यक औषधि अभाव भएको गौशाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. मनोज दासले बताए ।
‘दुई महिनायता औषधि सकिएको छ । निःशुल्क पाउनुपर्ने ३९ मध्ये अहिले दुई–तीन प्रकारका औषधि मात्रै उपलब्ध छ ।’–उनले भने । गौशला नगरपालिकाका सबै स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव भएको छ ।
‘महत्वपूर्ण औषधि सबैतिर सकिएको छ ।’–उनले भने–यसबारे कसैले चासो दिएको छैन ।’ उनले नगरपालिकालाई औषधि अभावको सम्बन्धमा जानकारी गराइसके पनि औषधि खरिद नगरिएको बताए ।
सो स्वास्थ्य चौकीमा गौशला, निगौल, बेलगाछी र रामनगरलगायतका वरिपरीका सर्वसाधारण सेवा लिन आउने गरेका छन् । अहिले दैनिक ७५ देखि ८० जनासम्म बिरामी नियमित रूपमा उपचारका लागि आउने गरेका छन् ।
औषधि नहुँदा सिटामोल समेत किनेर खानुस् भनेर पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्वास्थ्य केन्द्रका डा. दासले बताए । ‘सिटामोल समेत छैन । आइरन चक्की नहुँदा गर्भवतीले सेवन गर्न पाएका छ्रैनन् ।’–उनले भने–‘निःशुल्क दिने अस्थायी साधन पिल्स र डिपो तथा झाडापखाला लाग्दा सेवन गर्ने जीवनजल मात्रै छ ।’
सरकारले निःशुल्क रूपमा बिरामीलाई वितरण गर्न निर्देशन दिएका औषधि पेटको दुखाइ कम गर्ने बुस्कोपान, ग्यास्ट्रिकको औषधि डाइजिन, बान्ता रोक्ने प्रोमिथाजिन, आँखाको समस्या भएका बिरामीलाई लगाउने मलम सिप्रो लगायत सामान्य प्रकारका कुनै पनि औषधि स्वास्थ्य संस्थामा लामो समयदेखि नभएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । घाउ सफा गर्ने झोल औषधि बेटाडिन नभएको महिनौँ बितेको छ ।
यसका साथै एक्सरे मेसिन हुँदाहुँदै पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । बिरामीहरूले निजी क्लिनिकमा महङ्गोमा एक्सरे गराउन बाध्य भएको गौशालाका स्थानीय सञ्चारकर्मी धनबीर महतोले बताए । नगरपालिकाले पनि तत्कालै बजेट अभावका कारण औषधि किन्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ ।
गौशला नगरपालिकाका मेयर शिवनाथ महतोले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक औषधि अभाव हुनु दुःखदायी भएको स्वीकार गर्दै तुरून्तै निर्देशिका बनाएर औषधि किन्ने तयारी थालेको बताए ।
त्यसैगरी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामबावु साहले अस्पतालको लागि नयाँ भवन तयारी हुने क्रममा रहेको हुँदा उक्त भवन तयारी तिर ध्यान दिनु परेकाले औषधि अभाव भएको बताए । उनले नयाँ भवन तयार भएपछि एक्सरे मेसिन पनि सञ्चालनमा ल्याउने जनाए ।